Na-achọ ọnụego ịntanetị n'ụlọ? Zọpụta na ọnụego gị site na onyinye ndị a | Akụkọ akụrụngwa
Ọnụ ego ịntanetị ka ịnyagharịa ma chekwaa
N'oge na-adịbeghị anya, nhọrọ mgbe ị na-akwụ ụgwọ ịntanetị dị ole na ole. Nbudata njikọ ADSL nke mere ka anyi nwe obi nkowa inweta uzo web. N'ụzọ dị mma, netwọk haventanetị ka mma ma rute ọsọ ọsọ ruo 1Gb. Mana dị ka ọ dị na mbụ, nhọrọ ndị ọzọ ị ga - ahọrọ, nke na - esiwanye ike ịchọta nhọrọ nke dabara na ihe anyị chọrọ ma nye anyị ohere ịchekwa. Ya mere, taa anyị ga-eme a tụnyere n'etiti ndị kasị mma internet udu sọfụ n'ụlọ na-azọpụta n'otu oge.
Onyinye kacha mma: Home eriri 100Mb oroma
Gwọ dị ọnụ ala: Naanị eriri fiber
Ọnụ ọgụgụ zuru oke: 100Mb Fiber More Mobile
Ọnụ ọgụgụ ịntanetị kacha mma: Yoigo si 100Mb Fiber
Ugbu a na anyị maara na ịgha ụgwọ ịntanetị n'ụlọ na-enweghị ndozi, dị ọnụ ala ma na-enweghị adịgide bụ nhọrọ ndị dị adị n'ezie, ọ bụ oge ịbanye n'okwu ahụ ma nyochaa n'ụzọ miri emi ọnụego ndị ọrụ ahụ na-enye. Ị dịla njikere?
Movistar Jikọọ 300Mb Movistar 300Mbps 38 / ọnwa
Single Lowi Fiber 100Mbps 29.95 / ọnwa
Vodafone Fiber 300Mb 300Mbps 30.99 / ọnwa
Home eriri 100Mb oroma 100Mbps 30.95 / ọnwa
100Mb Fiber si MásMóvil 100Mbps 29.99 / ọnwa
Yoigo si 100Mb Fiber 100Mbps 32 / ọnwa
100Mb fiber na oku Jazztel 100Mbps € / ọnwa
1 Lowi, nhọrọ di Vodafone OMV a
2 MásMóvil na ọnụ ala eriri ọnụego
3 Ọnụego Fibra mmanụ oroma
4 Jazztel na eriri ọnụego ya ọhụụ
5 300 Mb ka ịnyagharịa Vodafone
6 Naanị 100Mb eriri eriri na Yoigo
Lowi, nhọrọ di Vodafone OMV a
Ruo n'oge na-adịbeghị anya, Lowi bụ otu n'ime nhọrọ kachasị mma ma ọ bụrụ na anyị chọrọ ịgbazite ịntanetị dị ọnụ ala yana mkpuchi dị mma. Ọ na-arụ ọrụ n'okpuru netwọk Vodafone, yabụ belụsọ na ibi n'ebe zoro ezo, ị nwere ike irite uru site na mkpuchi eriri n'enweghị nsogbu. Ọnụahịa ahụ bụ naanị euro 29,95 kwa ọnwa, ịbụ ọnụego fiber dị ọnụ ala na ahịa.
Ma ọ bụrụ na ọnụahịa ahụ yiri obere uru, a ka nwere ndị ọzọ. Ọnụego a enweghị adịgide, yabụ anyị nwere ike ịdaba ma ọ bụ gbanwee oge ọ bụla na-atụghị ụjọ ntaramahụhụ ma ọ bụ ntaramahụhụ. Na ha agaghị ana anyị maka echichi ma ọ bụ mbinye ego nke rawụta. Ọ bụrụ na ị gụchaa nkọwa nke eriri eriri Lowi ị gaghị eche ka inwe njikọ gị n'ụlọ, ị nwere naanị nweta njikọ a iji kpoo ọrụ gị.
MásMóvil na ọnụ ala eriri ọnụego
Onye na-acha odo odo amalitela ịgbanwe ahịa ọnụego. N'oge ahụ, ọ dị ka ọ dị n'ụzọ ziri ezi dịka eriri ya na onyinye ADSL so n'etiti ndị dị ọnụ ala. Maka naanị € 29,99 kwa ọnwa anyị nwere ike ịnụ ụtọ eriri 100Mb na oku na-akparaghị ókè site na akara ala.
N’ebe ego a n’ọnwa dị ọnụ ala, anyị agaghị agbakwunye ihe ọ bụla ọzọ kemgbe echichi na rawụta nweere onwe ya na ndebanye aha ọhụrụ. Mana ọ bụrụ na anyị ga-amata na o nwere ọnwa iri na abụọ nke na-adịgide adịgide, yabụ ọ bụrụ na anyị chọrọ ịgbanwe ọnụego ahụ tupu ngwụcha nke oge a, anyị ga-akwụ ụgwọ ntaramahụhụ.Iji kwanye ma ọ bụ nyochaa mkpuchi eriri nke MásMóvil, Anyị na-ahapụrụ gị njikọ a ka ị mee ya ọsọ ọsọ.
Ọnụego Fibra mmanụ oroma
N'ileghachi anya na katalọgụ oroma, anyị hụrụ ọnụego Fiber Home ịgbazinye ịntanetị n'ụlọ na ihe ọ bụla ọzọ. Ọnụego ndị a dị mma maka ndị chọrọ idobe ọnụọgụ ekwentị ha na njikọ ha n'ụlọ ma na-achọkwa ọnụ ala dị ọnụ ala. Kpọmkwem, ọ gụnyere oku na-akparaghị ókè na akara ekwentị yana oge 1000 iji kpọọ mobiles. Na ego ole? Ọ dị mma maka € 30.95 kwa ọnwa ihe niile.
Yabụ ọ bụrụ na anyị chọrọ eriri na mkpuchi Oroma, ọ kacha mma ịghara iche banyere ya. Hụọ ọnụego a ngwa ngwa na ngwa ngwa si ebe a.
Jazztel na eriri ọnụego ya ọhụụ
Mgbe ihe oyiyi ya sachara, Jazztel tụpụtara ka ọ gbanwee ọnụego eriri anyị nwere ike ibute. Karịsịa, ọ bụrụ na ọnụọgụ oroma anaghị eme ka anyị kwenye, ebe ha na-arụ ọrụ n'okpuru otu mkpuchi mkpuchi. Ọ bụrụ na anyị ga-akwado ịntanetị naanị ọnụego site na. Jazztel, otu nke kachasị mma ga-abụ ọnụego ya na 100Mb nke ọsọ ọsọ ọsọ na oku. Anyị nwere ike iji eriri igwe n’atụghị ụjọ ịbawanye ọnụego anyị, ebe ọ bụkwa na ọ gụnyere oku na-akparaghị ókè n’oge ọ bụla na onye ọrụ ya.
Ego ị na-akwụ kwa ọnwa bụ euro 28,95 kwa ọnwa, mana ugbu a anyị nọ n'ọma. Ihe kwesiri iburu n'uche ma oburu na anyi na eche echiche igbanwe intaneti anyi n'ulo. Iji rịọ ozi ndị ọzọ ma ọ bụ mee nkwekọrịta otu n'ime ọnụego ya, ị gaghị eme ihe ọ bụla karịa ịnweta njikọ a.
300 Mb ka ịnyagharịa Vodafone
Ọ bụrụ na anyị chọrọ ịmekọrịta ịntanetị na ndị ọrụ na-emebu iji zere nsogbu mkpuchi, anyị enweghị ike ichefu Vodafone na eriri ONO ya. Anyị nwere ọtụtụ ọnụego ịhọrọ site na, mana ọ bụrụ na anyị achọọ ịghara imefu oke oge n'otu oge ahụ ezigbo ọsọ ọsọ ịntanetị, ọ ga-abụrịrị na ọnụego kachasị Eriri Ono 300Mb.
Ihe kachasị mma bụ na ọnụego a nwere onyinye na ụgwọ ọnwa ya maka ọnwa 24, nke anyị ga-akwụ naanị € 39, na-echekwa karịa euro 200. Iji ghara ịhapụ onyinye a, ihe niile ị ga - eme bụ nweta njikọ a iji kwụọ ụgwọ ya ugbu a.
Naanị 100Mb eriri eriri na Yoigo
Ebe ọ bụ na Yoigo amalitela ahịa ọnụọgụ eriri, nhọrọ akụ na ụba mgbe ị na-akwụ ụgwọ abawanye. N'ime ọnụọgụ atọ enyere, anyị anyị na-akwado onye etiti ya na 300Mb, karịsịa maka ọnụahịa ya na ọsọ ya.
Anyị ga-eburu n’uche na ọnụego a nwere ezumike nke ọnwa 12 na ntaramahụhụ kachasị ịkwụ ma ọ bụrụ na anyị anaghị erubere ya bụ euro 100. Ma echegbula, n'ihi na ndebanye na nwụnye bụ n'efu ma ị gaghị akwụ ụgwọ na ụgwọ maka echiche ndị a. Ọ bụrụ na ị nwere mmasị na ọnụego a, i nwere ike iku ya online site na nke a njikọ ngwa ngwa.
Dị ka ị hụworo, enwere ọtụtụ nhọrọ anyị nwere mgbe ị na-akwụ ụgwọ ọrụ ịntanetị maka ụlọ. Karịsịa, ọtụtụ nhọrọ na-enye anyị ohere ịzọpụta. Ugbu a na ịmara onyinye kacha mma dị ugbu a n'ahịa dị na ọnụego ịntanetị, naanị ihe kacha sie ike fọdụrụnụ. Họrọ ọrụ ị ga-akwụ ụgwọ. Ọ bụrụ na ịmabeghị aka, ị nwere ike ịga na Roams onye nlekọta ma chọta ihe ị chọrọ.